राता नम्बर प्लेट का ट्याक्सीहरु
Aakar February 15, 2008
होस्टलमा हिजो बिहान आएँ , मतलब मेरो एकदिन होस्टल मा बित्यो अर्थात मेरो होस्टल जीवन को पहिलो दिन हिजो थियो । होस्टल मा सामान,काठमाडौँबाट कसरी ल्याउने भन्ने चिन्ता मलाई परेको थियो । त्यसैले एकपटक जडिबुटी मा ट्याक्सीलाई सोधेको थिँए , धुलिखेल केयु जान कति लाग्छ ? ड्राइभरले १ हजार मात्रै हो,भन्यो । म झस्के , अनि आफ्नो बाटो लागेँ । तर सामान त जसरी भएपनि लानै पर्छ , होस्टल मा ।
धेरै सोचियो, के गर्ने । केयु एक त नौलो ठाँउ फेरि केयु झन्डै १ किलोमिटर भित्र छ , अरनिको राजमार्ग बाट । त्यहाँ (वनेपा) सम्म सामान त सजिलै लान सकिन्छ बस बाट नै, त्यसपछि ??? उफ् ,साह्रै गाह्रो होला जस्तो छ । जे होला, सोही टर्ला भन्ने मानसिकता बनाँए , अनि सामान (झोला-झाम्टा) काठमाडौँ-धुलिखेल चल्ने बसबाट बनेपा को सालिकचोक मा ओरालेँ ।
भदौ को महिना पानी सिमसिम परिरहेको छ । मन मा कता-कता डर लागिरहेको छ , सामान कसरी लाने ? गुन्टा-झोला खलासीले बसबाट झिकेर त्यही हिलो भुँइ मा राख्दिसकेको छ । झोला गुन्टा भुँइ मा राखिसकेपछि , म कसैलाई कुरेझैँ गरी घडि हेर्दै यता र उता गर्न थालेँ किनभने बनेपा चोक मा भएका मान्छेहरुले मलाई नै हेरिरहेको जस्तो मलाई लागिरहेको थियो । त्यसैले अरुहरुको ध्यान , म बाट हटाउन , म कसैलाई कुरेझैँ गरी बेला-बेलामा घडि हेर्दै , तर मनमनै सामान कसरी केयु होस्टलमा लाने भनेर सोचमग्न थिए । अरुहरुले यो कुरा थाहा पाए-पाएनन् मलाई थाहा छैन ।
मेरा सामानहरु एक महिला को पसल अगाडि थियो। उनले मलाई धेरै बेर हेरिन् अनि सोधिन – “यो सामान कहाँ लाने हो ?”, “केयु होस्टल” मैले जवाफ दिँए । तब उनले थपिन् –“रिक्सा बोलाउनु न त !” , मैले हत्तपत्त जवाफ दिँए –“म त्यही सोच्दैछु” । सायद यो सबैकुरा , अघि म आएको बस को कन्डक्टरले हेरिरहेको थियो,अनि सुनिरहेको थियो , त्यसैले उसले भन्यो-“त्यत्रा ट्याक्सी र जिप छन् , लिएर जानुस्न्” । म छक्क परेँ –“के भन्नुभएको,यहाँ त सबै राता नम्बर प्लेट का गाडीहरु छन्” । उसले भन्यो-“प्लेट रातो मात्रै हो,सबै भाडा मा चल्छन्” । मलाई उसको कुरा भरपर्दो लागिरहेको थिएन,अत: डराइ-डराइ,एउटा मारुति भ्यान मा गएर सोधेँ –“केयुसम्म जानुहुन्छ ?” , “गैहाल्छु नि”-ड्राइभरले भने,अनि ट्याक्सी मा सामान हालेर केयुसम्म आँए ।
सामान त ल्याँए तर मेरो दिमागमा त्यही बनेपाका राता नम्बर प्लेट का ट्याक्सीहरु गुडिरहेका छन् ।
के राता नम्बरप्लेट का गाडिहरु भाडा मा चल्न पाउँछन् ? यदि त्यसो हो भने,काला प्लेट का गाडीहरुले के गर्ने ? राता नम्बर प्लेट भएका गाडिहरु “निजि सवारी साधन” हुन् भन्ने कुरा कानुन मै उल्लेख छ र त्यस्ता गाडि भाडा मा चल्न पाउँदैनन् पनि । तर राजश्व तथा कर “कम (थोरै) ” पर्ने बताउँदै ड्राइभरले “रातो प्लेट” राखिएको बताए ,जब मैले यो त –“गैरकानुनी काम हैन र ?” भनेर सोधेको थिँए । खै देश मा कानुन छ कि छैन ? कि कानुन गरिब-निमुखालाई मात्रै लाग्ने हो ??? हैन भने ति ट्याक्सी-जिप (गाडी) धनिहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने हैन र ? गाडीहरु निर्वाधरुपले गुडिरहेका छन् , “के यो अनुगमन गर्ने निकाय छैन ?” भनेर एक प्रहरीलाई सोधेको थिँए, उनले जवाफ दिए –“यहाँ यस्तै छ,भाइ” । एकजना ड्राइभरले त “यसले त तपाईहरुलाई नै सजिलो भैरहेको छ नि , के तपाई ले यहाँका गाडीहरुको उपयोग गर्नुभएको छैन र ?” भन्ने प्रतिप्रश्न गरे ।
त्यस्तो आँखै अगाडि कानुन उल्लघंन भैरहदाँ , स्थानिय निकाय किन मौन छ ? के यसमा उनिहरुको पनि मिलेमतो छ ?
देशको ढुकुटिमा जानुपर्ने पैसा एक व्यक्ति ले खाइरहेको छ , अनि रातो नम्बर प्लेट राखेर सार्वजानिक सवारी-साधन को काम गरिरहेको छ । के यसो गर्न पाइन्छ ?
साँच्चै भन्ने हो भने,अब हामी सबै जागरुक हुने बेला आइसकेको छ । सायद यस्तो समस्या अन्यत्र पनि होला ! खोज्ने कल्ले,हेर्ने कल्ले,अनि कारवाही गर्ने कल्ले ?
बनेपा मा चल्ने जिप तथा ट्याक्सी कुनै को पनि कालो नम्बर प्लेट छैन । त्यसैले मेरा साथिहरु भन्ने गर्छन् –“खै सामान कसरी ल्याउने यार,एउटै ट्याक्सी छैन बनेपा मा”,तर जब म भन्छु -“ति राता नम्बर प्लेट भएका सबै गाडीहरु भाडामा चल्ने जिप तथा ट्याक्सीहरु हुन्” , तब ति सबै साथीहरु छक्क पर्ने गरेका छन् । “नेपाल को कानुन जसले बनायो,उसैले जानुन”। कानुन कहीँ परिपालन हुने हैन क्यारे ! व्यर्थ मा किन कानुन बनाउनु ? यहाँ सबैलाई लुट गर्ने छुट छ,त्यसैले लुट अझै लुट,ब्रम्हलुट गर,आफ्नो भुँडी भर,मोज गर। किनकि यहाँ कानुन लेखिन्छन मात्र,अनि जब लागु हुन्छ त्यतिखेरसम्म धेरै ढिलो भैसकेको हुन्छ ।
भाद्र-२०६४ , आकार को डायरीबाट
Anonymous February 16, 2008 at 10:59 AM
No thing Special on this Post . AAkar ji aali creative article lekhne jarnusna!
Guest February 17, 2008 at 10:28 PM
ooh there is also red number plate vehicle runs i think this is only in phokara. ya you r right now days anyone can do what ever they want.......best of luck for your study.
Anonymous February 19, 2008 at 8:07 AM
यहाँ कानुन नै छैन जस्ले जे गरे पनि केही भयो भने घुस खुवायो खुवाउने निस्क्यो खुवाउन नसक्ने चै बस्यो उतै ।
लोकतन्त्र पछी सरकार कमजोर भयो अनी सबैले फाईदा उठाए, प्रहरी प्रशासनले केही कामै गर्दैन ।
Anonymous February 19, 2008 at 1:05 PM
never knew about this red-plated taxi.. thanks for letting us know dude :)
chandramani November 12, 2010 at 4:57 AM